Osisi na Plastic Bits
Agara m azụ otu puku afọ gara aga wee bụrụ onye nyocha
Mgbe m bụ nwata, ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere ike bụrụ Conan, na -enwe egbe ya nke nwere otu ụdị, na mgbe m gbachara onye ọzọ, eji m nwayọ bulie igwe okwu bowtie, mgbe m nwesịrị echiche siri ike, ekwuru m: “Enwere naanị otu eziokwu. ” Mgbe m tolitere, enwere m anyaụfụ Kogoro A ...
Ọ ga -abụ ịnyịnya gbara ọchịchịrị nke SDJ Awards nke afọ a?
N’ọnwa gara aga, SDJ kwa afọ kwupụtara ndepụta ndị chọrọ ntuli aka. N'oge ugbu a, onyinye SDJ abụrụla okpu okirikiri egwuregwu bọọdụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na -ekpebi ụkpụrụ egwuregwu iji hụ ma ọ nwetala ihe nrịba ama egwuregwu bọọlụ dị iche iche, ịghara ịkọwa egwuregwu SDJ nke ndị egwuregwu German jiri nlezianya họrọ. Nke a ị ...
Ụfọdụ ndị mmadụ na -agbakọta ọnụ, ụfọdụ na -atụgharị tebụl, mana nke a ka bụ egwuregwu bọọlụ nwere ezi obi.
N’afọ 2019, Will kwupụtara atụmatụ ịtọhapụ “Pamir Peace: Edition Edition” na nyiwe mmekọrịta dị iche iche. Na mmekorita ozi, otu netizen jụrụ ya n'ike ma ọ bụrụ na o nwere atụmatụ ibipụta "ụlọ ọrụ John". Ọ zara, "Otu ụbọchị. Mana ọ ga -ewe opekata mpe afọ abụọ ...
Ezigbo egwuregwu egwuregwu bọọlụ na -eme egwuregwu na ego nke ha
Ka anyị gaghachi na Eprel 2020. N'oge ahụ, ọrịa na -efe efe ka malitere na mba ofesi, ndị mmadụ tọrọ atọ n'ụlọ enweghị ihe ha ga -eme. Ndị egwuregwu tebụl anaghịkwa ezu ike. Dịka anyị niile maara, ndị na -egwu tebụl bụ nnukwu eserese na -eme maapụ egwuregwu nke ha, igbe nchekwa yana ọbụna tebụl egwuregwu raara onwe ha nye. Na ...
Nna nwere nwa ka nwere ike wepụta “ụwa egwuregwu bọọlụ”
Ị hụtụla nna na -elekọta nwa ewu? N'uche ọtụtụ ndị mmadụ, ndị nna na -elekọta ụmụ ha = “enweghị isi”. Mana na Huddersfield, UK, e nwere nna dị otú ahụ, na -elekọta ụmụ ya ọ bụghị naanị na ọ mara mma nke ukwuu, na ụzọ, haziri bọọdụ g ...
Egwuregwu a, nke na -ere 17 setịpụrụ otu nkeji, tụgharịrị afọ iri ise n'afọ a
site na nchịkwa na 21-02-01
Na 1971, na obere obodo Cincinnati, Ohio, enwere ọtụtụ ndị bi na Itali. Otu n'ime ha bụ ezinụlọ Robbins. Ọ na -amasị ha igwu egwuregwu kaadị akpọrọ Crazy asatọ, mana ha na -arụkarị ụka gbasara iwu na -agbanwe agbanwe. Yabụ, ha degharịrị iwu ahụ wee kpọọ ya UNO. Mgbe ị nwere kaadị ikpeazụ fọdụrụ, ...
Otu esi ezere '' Ọdachi chepụtara '' nke mkpuchi egwuregwu
N'ileghachi anya n'ahịrị egwuregwu bọọlụ dị na akwa egwuregwu, ị nwere ike icheta egwuregwu mkpuchi ya nwere mmasị na nlele mbụ? Ma ọ bụ egwuregwu nke usoro ya na -atọ ụtọ, mana ọ dị ntakịrị egwu. Ruo n'ókè ụfọdụ, mkpuchi egwuregwu na -ekpebi ma egwuregwu ọ dị mma ma ọ bụghị. Site na ndozi nke ndị mmadụ '...
Usoro na -eto eto maka otu nwanyị nke Korea Board Game Design
Ụlọ ọrụ arụsị ahụ etoola nke ọma na South Korea. Dịka okwu a na -aga, Korea nwere akụ atọ: arụsị, ịzụ ahịa, nri. Arụsị ndị mara mma bụ otu, mana arụsị na-atọ ụtọ dị ole na ole. N'oge na -adịbeghị anya, N'ime ụlọ ọrụ ihe osise nke ọgbọ na -eto eto na South Korea, enwere m ...
Onye na -emepụta Kylin bụ onye nrụpụta egwuregwu bọọdụ na -anabata nnukwu na nhazi
Onye na -emepụta Kylin nwere ezigbo ọrụ anyị nwere ike ịhazi gị, ụdị ọ bụla ma nye ọnụahịa ụlọ ọrụ. Anyị kwenyere na nkwukọrịta na -aga nke ọma n'etiti ndị nrụpụta na ndị ahịa dabere na ntụkwasị obi na ịkwụwa aka ọtọ. Ịrapara nrube isi n'iwu a na -enye anyị ohere izute mgbe niile ma gafere ...
Ụlọ nrụpụta Kylin bụ ọkachamara na -emepụta egwuregwu bọọdụ
Ụlọ ọrụ Kylin bụ onye nrụpụta ọkachamara na onye na -ebubata egwuregwu bọọdụ, egwuregwu kaadị, kaadị egwuregwu, ihe egwuregwu, akwụkwọ mmado velvet, igbe nkwakọ ngwaahịa na ngwa. Anyị na -arụ ụlọ nrụpụta anọ gụnyere; ebi akwụkwọ, osisi, mkpụrụ ego & plastic. Anyị na -akwado ihe karịrị akụkụ egwuregwu 10 pr ...
Ọhụụ ụlọọrụ nke onye nrụpụta egwuregwu bọọdụ
Ụlọ ọrụ Kylin bụ onye nrụpụta ọkachamara na onye na -ebubata egwuregwu bọọdụ. Ọhụụ anyị bụ: 1. Imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa ụwa niile na inye ha ntụkwasị obi, ọrụ ịkwụwa aka ọtọ, ịbụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na ngwaahịa egwuregwu. 2. Ịrara onwe anyị nye n'ịkwalite usoro mmepụta anyị ...
Egwuregwu Board Board, Aka uwe, Kaadị nkwenye na njide osisi, Dais omenala, Playmatụ ebipụtara nkeonwe, Kaadị Egwuregwu Omenala,